AMISOM: Shan magaalo ayaa Laga saaray Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. AMISOM: Shan magaalo ayaa Laga saaray Alshabaab * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ee dalka Soomaaliya ayaa shaaciyey inay billowdeen howlgallo ay wadajir u fulinayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, kuwaas oo Al-Shabaab loogala wareegay magalooyin muhiim ah oo ka tirsan gobollada Bay, Bakool iyo Gedo.
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Danjire Mahamat Saleh Annadif ayaa u mahadceliyey shacabka Soomaalida ee ku nool magaalooyinka laga qabsaday Alshabaab, kuwaas oo iskaashi iyo taageeraba u muujiyey ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, sida uu yiri.
Dagaaladda lagu qaaday deegaanada Alshabaab ka maamulaan ayaa sababay barkaca dad aad u farabadan xilli qorraxdu kulushahay.